Fakkii Henri Matisse (1933)
Henri Matise (Le Cateau-Cambrésis, Nord, 31 Mudde 1869-3 Sadaasa 1954) artiistii fireench halluu fayyadamuu fi yaada haara maddasiisuun beekamuudha.
Inni sirritti kan beekamu akka halluu dibaatti, garuu inni fakkii kaasaa fi siidaa fi suuraas bocaa ture. Matiseen artiistoota gurguddoo jaarraa 20ffaa keessatti artii ammayyaa uumuuf gargaaran keessaa isa tokko.
′′Matiseen qabaa halluu mijataa halluuwwan furdaa hanga sararaa buruusha akaakuu garagaraa irratti godhuun uume. Kuni sochii avant-garde (1905-7) isa jalqabaati kan aartii kiritik Fauvism jechuun tasa walitti qabama hallu ifaa fayyadamuu fi hojii burushaa cimina qabu wali makuu ibsuuf moggaaseedha.′′
Inni jalqaba Fauve (bineensa alaa) jedhamuyyu, isaan aadaas hedduu dibee jira. Jireenya kan dibee inni, hojiin isaa fakkii adda addaa fi kanneen biroos ni dabalata. Hayyuummaan jachama afaanii fi halluu isaa hojii jaarraa walakkaa keessa ture, beekamti akka hogganaatti aartii ammayyaa keessatti isa gonfachiise.
Matiseen dhukkuba onneen Nice, Alpes-Maritimes keessatti du'e.
Geessituu alaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Matisse&oldid=37564" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 20 Bitootessa 2022, sa'aa 22:56 irratti.